Sidee in ay tirtirto barnaamijyadooda ka telefoonka (android ama iPhone)
1.How in ay tirtirto barnaamijyadooda ka qalab android
2.How in ay tirtirto barnaamijyadooda nidaamka ka android
3.How in ay tirtirto barnaamijyadooda ka iPhone / iPad
Ka dib markii aad iibsatay phone fantastik ah isagoo nidaamka Android ama hawlgalka macruufka, hubaal waad ku rakibi doonaa dhowr Chine in qalab aad u fududahay in la isticmaalo, waayo hawlaha maalin kasta la sameeyo. Waxaa jira xaalado marka barnaamijyadooda jir ma sii socon doonaa si aad, tusaale ahaan ka dib markii hagaajinta nidaamka qalliinka. Haddii kuwa barnaamijyadooda aad isticmaasho aan sidoo kale la casriyeeyay ay ku dhiirigelinayaan, waa fursad weyn in aan ka shaqeeyo mar dambe ku qalab aad. Sidaas darteed, waxa kaliya ee aad samayn karto waa in ay tirtirto barnaamijyadooda kuwa.
Qaybta 1aad Sidee in ay tirtirto barnaamijyadooda ka qalab android (talaabo sharaxaad tallaabo la Screenshot tallabo kasta)
Qalabka Android ay leeyihiin qaar ka mid ah talaabooyinka gaarka ah si ay u isticmaalaan tirtirka ee Dalka Chine. Qalab ugu badan ee loo isticmaalo rakibidda barnaamijyadooda ku saabsan qalabka android waa Google Play. Sidoo kale, waayo, tirtirka ama uninstalling app aad isticmaali karto Google Play Store app ama Settings ka ciyaari ka menu qalab ee.
Haddii aad doorato in aad isticmaasho app Play Google ee, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Raadi Play Google ee icon iyo furi app
In badan oo xaaladood, Play Store app Google waxa uu ku yaalaa on desktop qalab ee. Fur app oo taga si "barnaamijyadooda My" qaybta.
2. Raadi "My barnaamijyadooda" qaybta hoos meu Play Google ee
Hel My Apps oo waxaad arki doontaa oo dhan barnaamijyadooda ku rakiban telefoonka.
3. barnaamijyadooda uninstall
In liiska la daadiyo, waxaad arki doontaa fursad u uninstall. Dooro Doorashadan u app kasta oo aad rabto in aad tirtirto.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho Settings ka ciyaari ka qalab aad, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Raadi barnaamijyadooda ku hoos Settings
Tag Settings telefoonka iyo raadin Apps.
2. Dooro app ama Apps aad dooneyso in aad tirtirto
In Settings aad telefoonka ee, qaybta barnaamijyadooda waxaad ka arki kartaa oo dhan barnaamijyadooda ku rakiban. Dooro app in aad u baahan tahay siinin mar dambe iyo uninstall taaban.
Dhowr barnaamijyadooda ka hor-dhisay aan la tirtiri karaa ka telefoonka.
Part 2 Sidee in ay tirtirto barnaamijyadooda nidaamka ka android (xidid) (talaabo sharaxaad tallaabo la Screenshot tallabo kasta)
Chine System qalabka android aad la hor-rakibay karo oo inta badan yimaado pre-dhisay nidaamka qalliinka. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya tirtirka ee Chine rakibay aad ka Google Play tusaale ahaan, iyo tirtirka ee Chine pre-rakibay. Your qalab android waa la rujin laga yaabaa in kale. Si loo helay haddii telefoonka aad android habaysan ama aan iyo sida laga rujin karo, waxaad ka raadin kartaa in tilmaamaha in ay yimaadaan la qalab aad ama waxaad ka raadin kartaa faahfaahin online aad model gaar ah, sida caadiga ah galay website soo saare ee. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa in qalab rujin android waa u fududahay in ay maareeyaan, oo ay ku jiraan tirtirka ee Dalka Chine. Waxaad isticmaali kartaa app Xisbiga 3-in uninstall barnaamijyadooda ka hor dhisay. Waxaa jira badan oo Chine oo lacag la'aan ah in Google Playfor uninstalling barnaamijyadooda geelaa. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ka taxadartaa la tirtirka ee Chine pre-ka dhisay, waayo, tirtirka ee qaar ka mid ah waxyeeli kara nidaamka qalliinka android qalab ee.
Part 3 Sidee in ay tirtirto barnaamijyadooda ka iPhone / iPad (talaabo sharaxaad tallaabo la Screenshot tallabo kasta)
Waxaad tirtiri kartaa barnaamijyadooda ka iPhone ama iPad, mid mid ama doorataa dhowr mar. On screen qalab ee uu taabto app in aad dooneyso in aad tirtirto. By xulashada "Delete", ayaa sidoo kale aad tirtirto doonaa xogta laga app in.
Raac tallaabooyinkan in ay tirtirto barnaamijyadooda ka iPhone ama iPad:
1. Eeg shaashadda qalab ee app ee aad dooneyso in aad tirtirto
Unlock screen aad iDevice iyo dooro mid app ama dhowr barnaamijyadooda si ay u tirtirto.
2. Touch Delete
Ka dib marka aad soo xulay app, lagu weydiiyo in aad haddii aad rabtid in aad u tirtirto. Taabo ok iyo app laga tirtirayaa oo ay la socdaan macluumaadka ay.
Sida loo dayactir la qaboojiyay iPhone a
Kulli wixii aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan kulayl iPhone iyo siyaabaha loo hagaajin arrintan
General Options Dayactirka iPhone Your jaban
Apple iPhone 1: Generation Koobaad ee iPhone Kharashka Illaa $10.000
3 Hababka la Sameeyo kaabta iPhone SMS
> Resource > iPhone > Sida loo tirtiri barnaamijyadooda ka telefoonka (android ama iPhone)